मित्रतामा दुश्मनी ः होस पु¥याउन जरुरी
डा. विनिता –
नेपाल १३औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको थियो, भारतले शुभकामनासम्म पठाएन । जेठ १७ गते भारतको भाजपा सरकारले दोश्रो कार्यकालको पहिलो वर्षगाँठ मनाइरहदा रषा मनत्री र गृहमन्त्रीको प्रतिक्रिया नेपाललाई तर्साउने खालको रह्यो ।
रक्षामन्त्रीले भने– नेपाल भाइ हो, सीमा समस्या ठूलो समस्या होइन । मिल्छ । गृहमन्त्रीले भने– नेपालले कालापानी क्षेत्रमा दावी गर्नु गलत हो, भारतमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाउन पनि सकिन्छ, अर्थात लखेटिने छ । यही बेला भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरु नेपाल फर्किरहेका छन्, २५ लाख घर फर्कने अनुमान गरिएको छ । यी सबैलाई कोरोना जाँच्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको ठूलै समस्या परिरहेको छ । भारतले नेपाले सीमा दावी गरे ठूलै संकट खप्नुपर्ने सम्झना गराएको बुझ्न सकिन्छ । भारत कोरोना महामारीले यति संवेदनहीन हुन्छ भन्ने अनुमान थिएन ।
नेपालका नेताहरुलाई भारत रिसाउला कि भन्ने ठुलै पीर परेको छ । सरकारलाई भारतले गणतन्त्र दिवसमा पनि शुभकामना पठाएन भन्ने चिन्ता छ । श्यामशरण भन्ने पूर्वराजदूत नेपालमा बसेर नेपालको सीमा दावीमा मत, मन फुटाउने काम गरिरहेका छन् । सर्वसम्मत हुन नदिने उनको खेल छ ।
नेपाल वार्ता गरौं, प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या सुल्झाऔ भनिरहेको छ, भारत सीमा अतिक्रमण गर्ने, राजमार्ग र कलभर्ट बनाएर नेपाललाई डुबानमा पार्ने हरकत गरिरहेकै छ । नेपालसँग वार्ता गर्ने मूडमा भारत देखिन्न ।
दोक्लाम र लद्दाखमा चीनसँग सीमा समस्यामा युद्धको स्थिति आइसक्यो । काश्मिरमा पाकिस्तानसँग युद्ध हुने खतरा बढेको छ । सीमा भारतलाई दुख्छ भने नेपाललाई पनि आफ्नो सीमा दुखेको होला भन्ने भारतले सम्झन सकेन । भारत जसरी पनि नेपालको सीमा मिच्न दाउमा छ, षडयन्त्र गरिरहेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन बढेको छ । लकडाउन भारतमा पनि लागेको छ । मानव सभ्यतामाथि नै बिपद आइलागेको बेलामा समेत भारतले नेपाललाई अठ्याउन छाड्दैन भने उसको नियत साफ छ– नेपाललाई सके भारतमा मिलाउने, नसके भारतको दबदबामा नेपाललाई राख्ने । नेपालको सीमा नियमन र नियन्त्रणका उपाय नगर्ने ? अतिक्रमण गरिरहने र नेपालबाट लाभ लिइरहने । भारतको यही उद्देश्यमा नेपालले खिटिम खेलेको अर्थमा भारतले गणतन्त्र दिवसलाई समेत मानेन, शुभकामना पठाएन । नेपाल भारत सम्बन्ध जतिसुकै सुमधुर भने पनि सम्बन्धमा साह्रै चिसोपन बढिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नेपालको नक्सा विवादका सम्बन्धमा संसदमै भारतबाट आएको कोरोना कडा खालको भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि भारत रिसाएको बुझ्न सकिन्छ । कतिपय भारतपक्षीय नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीलाई गालीको संज्ञा पनि दिएका छन् । ती कस्ता बुद्धिजीवी, जो भारतले नेपालको भूभाग नक्सामा हालिसक्दा केही बोल्दैनन्, ती भूभाग नेपालका हुन् भनेर नक्सा जारी हुँदा भारतलाई चिढाउने काम भयो भन्छन् । आफ्नो देशको सीमाको कुरा नगरे के गर्छ सरकारले ?